Antoko politika maromaro… : « avoahy ny lalam-pifidianana sy ny daty…. » | NewsMada
Antoko politika maromaro… : « avoahy ny lalam-pifidianana sy ny daty…. »
Namoaka fanambarana ny antoko politika maromaro, omaly, maneho fitakiana manoloana izao raharaham-pirenena izao. Anisan’ny nitondran’izy ireo ny heviny ny momba ny fifidianana, tokony hatao amin’ity taona ity.
“Ho an’ny governemanta, avoahy ny datim-pifidianana sy ny lalàm-pifidianana. Ho an’ny Ceni, apetraho ny maha andrimpanajakana mahaleo tena anareo ”, hoy ny fanambarana nosoniavin’ny mpitarika antoko politika maromaro. Anisan’izany Andrianainarivelo Hajo, Beriziky Omer. Eo koa Raharisaina Hery sy ny PLD, tarihin-dRabeharisoa Saraha. Manampy izany ny PDCM sy ny PSD amin’ny alalan’i Bezaza Eliana. Nohitsin’izy ireo fa ho tompon’andraikitra amin’ny mety hitranga eto amin’ny firenena ny mpitondra. “Atsaharo koa ny fandrebirebena saim-bahoaka ataonareo io” , hoy ihany izy ireo.
Ankoatra izany, nanterin’ny fanambarana fa tsy ilaina izany fifanarahana politika izany. “Tsy firenena anaty rotaka isika ary tsy azo ekena ny tsimatimanota izany”, hoy ihany izy ireo.
Kandidà mahafeno fepetra….
Manampy izany, miantso ny hery politika rehetra sy ny olom-pirenena ireto antoko politika ireto mba hijery sy handamina ny kandidà harotsany hofidina hifaninana amin’ny fifidianana filoham-pirenena. “Mba olona mahafeno ny fepetra sy azo fidiana izany kandidà izany”, hoy ihany izy ireo.
Hatreto anefa, tsy mbola manangasanga ny fivoriana tsy ara-potoan’ny Antenimiera roa tonta : solombavambahoaka sy ny loholona handinika izany volavolan-dalàna momba ny fifidianana izany. Efa niely ny feo fa tokony ho amin’ny antenantenan’ity volana febroary ity. Andrasana ny mety ho tohiny. Miankina amin’izany fitsipi-dalao izany ny ho avin’ny fifidianana sy ny fotoana na daty hanaovana ny fifidianana.